သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးထားအိပျခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူးမြား
HomeKnowledgeသံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးထားအိပျခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူးမြား
သံပရိုသီးကို ရနှေေးနဲ့ စိမျသောကျရငျ အစာခဖြေကျြခွငျးနဲ့ ကိုယျခံအားစနဈအတှကျ အကြိုးရှိစပေါတယျ။ သံပရိုသီးရဲ့ စိတျဝကျစားစရာ အကြိုးကြေးဇူးတှလေညျး အမြားကွီး ရှိပါသေးတယျနျော။ သံပရိုသီးရဲ့ စှမျးအားတှကေ မကုနျဆုံးနိုငျအောငျပါပဲ။ သံပရိုသီးက အိပျစကျနတေဲ့ အခြိနျမှာတောငျ အကြိုးပွုနိုငျပါတယျ။ သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားအိပျရုံပါပဲ။
- သံပရိုသီးကို အခွမျးလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးလိုကျပါ။
- သံပရိုခွမျးတှကေို ပနျးကနျလုံးတဈလုံးထံ ထညျ့ပါ။
- ပနျးကနျလုံးကို အိပျယာဘေးမှာ တဈညလုံးထားပါ။
ညတိုငျးထားပေးမယျ ဆိုရငျတော့ အံ့အားသငျ့စရာ ရလဒျတှကေို မွငျတှရေ့မှာပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ လူဦးရေ 32% မှာ သှေးတိုးရောဂါ ရှိပါတယျ။ သံပရိုသီးက သှေးတိုးရောဂါအတှကျ တကယျကို အသုံးဝငျပါတယျ။ သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားပေးရုံနဲ့ သှေးတိုးကစြပေါတယျ။ အပွငျးအထနျ သှေးတိုးလာရငျတော့ ဆရာဝနျဆီသှားပွတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
2. စိတျဖိစီးမှုတှေ လြော့စတေယျ။
အကွောငျးအရာပေါငျး မြားစှာကို တဈနကေုနျ စဉျးစားလုပျကိုငျပွီးတဲ့ အခါ အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျးက ပငျပနျးလာပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝနဲ့ အနားယူနိုငျဖို့က အရေးကွီးလာပါပွီ။ သံပရိုခွမျးရဲ့ရနံ့လေးတှကေ အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျးကို သကျသာရာရစပွေီး ပငျပနျးမှု ပြောကျစပေါတယျ။
3. အသကျရှူရ ကောငျးစတေယျ။
သံပရိုသီးရဲ့ အငျတီအောကျစီးဒငျ့က နှာခေါငျးပိတျခွငျးနဲ့ ဓာတျမတညျ့ခွငျးမြားကို သကျသာစပေါတယျ။ အခနျးထဲက လထေုညဈညမျးမှုမြားကိုလညျး သံပရိုခွမျးက သနျ့စငျပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားခွငျးဖွငျ့ အနံ့အသကျဆိုးတှကေို ဖယျရှားနိုငျမှာပါ။
4. အငျးဆကျပိုးတှကေို ဖယျရှားပေးတယျ။
သံပရိုသီးက အငျးဆကျပိုးတှကေို ဖယျရှားနိုငျမယျ့ သဘာဝနညျးလမျးကောငျးတဈခုပါပဲ။ အငျးဆကျပိုးတှကေ သံပရိုခွမျးရဲ့ရနံ့ကို မခံနိုငျလို့ မွနျမွနျထှကျပွေးသှားကွမှာပါ။
5. မနကျခငျးအိပျယာထရငျ အားအငျပွညျ့ဝစတေယျ။
သံပရိုသီးက အသကျရှူခွငျးနဲ့ အာရုံကွောအဖှဲ့အစညျးအတှကျ အကြိုးရှိစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝ အိပျပြျောနိုငျပါတယျ။ သံပရိုသီးရဲ့ ရနံ့က ပြျောရှငျစတေဲ့ ဟျောမုနျးထုတျလုပျမှုကို တိုးမွှငျ့ပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မနကျခငျးဆိုရငျ ပြျောပြျောရှငျရှငျ လနျးလနျးဆနျးဆနျး နိုးလာနိုငျမှာပါ။
သံပရိုခြမ်းလေးတွေကို အိပ်ယာဘေးထားအိပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
သံပရိုသီးကို ရေနွေးနဲ့ စိမ်သောက်ရင် အစာချေဖျက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။ သံပရိုသီးရဲ့ စိတ်ဝက်စားစရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်နော်။ သံပရိုသီးရဲ့စွမ်းအားတွေက မကုန်ဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ သံပရိုသီးက အိပ်စက်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ သံပရိုခြမ်းလေးတွေကို အိပ်ယာဘေးမှာ ထားအိပ်ရုံပါပဲ။
- သံပရိုသီးကို အခြမ်းလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးလိုက်ပါ။
- သံပရိုခြမ်းတွေကို ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထံ ထည့်ပါ။
- ပန်းကန်လုံးကို အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညလုံးထားပါ။
ညတိုင်းထားပေးမယ် ဆိုရင်တော့ အံ့အားသင့်စရာ ရလဒ်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ 32% မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိပါတယ်။ သံပရိုသီးက သွေးတိုးရောဂါအတွက် တကယ်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ သံပရိုခြမ်းလေးတွေကို အိပ်ယာဘေးမှာ ထားပေးရုံနဲ့ သွေးတိုးကျစေပါတယ်။ အပြင်းအထန် သွေးတိုးလာရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
2. စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့စေတယ်။
အကြောင်းအရာပေါင်း များစွာကို တစ်နေကုန် စဉ်းစားလုပ်ကိုင်ပြီးတဲ့ အခါ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းက ပင်ပန်းလာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ရေးဝဝနဲ့ အနားယူနိုင်ဖို့က အရေးကြီးလာပါပြီ။ သံပရိုခြမ်းရဲ့ရနံ့လေးတွေက အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းကို သက်သာရာရစေပြီး ပင်ပန်းမှု ပျောက်စေပါတယ်။
3. အသက်ရှူရ ကောင်းစေတယ်။
သံပရိုသီးရဲ့ အင်တီအောက်စီးဒင့်က နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်ခြင်းများကို သက်သာစေပါတယ်။အခန်းထဲက လေထုညစ်ညမ်းမှုများကိုလည်း သံပရိုခြမ်းက သန့်စင်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သံပရိုခြမ်းလေးတွေကို အိပ်ယာဘေးမှာ ထားခြင်းဖြင့် အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။
4. အင်းဆက်ပိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။
သံပရိုသီးက အင်းဆက်ပိုးတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ အင်းဆက်ပိုးတွေက သံပရိုခြမ်းရဲ့ရနံ့ကို မခံနိုင်လို့ မြန်မြန်ထွက်ပြေးသွားကြမှာပါ။
5. မနက်ခင်းအိပ်ယာထရင် အားအင်ပြည့်ဝစေတယ်။
သံပရိုသီးက အသက်ရှူခြင်းနဲ့ အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။ သံပရိုသီးရဲ့ ရနံ့က ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မနက်ခင်းဆိုရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးလာနိုင်မှာပါ။